Petrogenesis: chii zvazviri, hunhu uye mhando dzekuumbwa kwedombo | Network Meteorology
Shanduko yemamiriro ekunze
ChiGerman Portillo | 25/03/2021 11:26 | Geology
Nhasi ticha taura nezve rimwe rematavi e geology ayo anotarisa pakudzidza matombo, mavambo, kuumbwa uye kwemuviri uye kwemakemikari zvivakwa pamwe nekupararira kwevhu pasi. Iri bazi regeology rinonzi petrology. Izwi rekuti petrology rinobva kune anoshanda petro zvinorevei dombo uye kubva kumalogo zvinoreva kudzidza. Kune misiyano ne lithology inotarisa padombo kuumbwa kwenzvimbo yakapihwa. Mu petrology iyo petrogenesis. Icho chiri pamusoro pekutangira kwematombo.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese hunhu, mavambo uye zvidzidzo zve petrogenis.
1 Mhando huru
2 Kwakatangira petrology uye petrogenesis
3 Petrology Zvidzidzo
4 Mhando dze petrogenis
Petrology yakakamurwa kuita nzvimbo dzinoverengeka dzakasarudzika zvichienderana nerudzi rwedombo ruchadzidzwa. Naizvozvo, kune matavi maviri epatsanuro yezvidzidzo izvo ndiwo petrology ematombo edimentary uye iyo petrology yematombo anegneous uye metamorphic. Yekutanga inozivikanwa nezita rekunze petrology uye yechipiri izita rekuti endogenous petrology. Kune mamwezve matavi anosiyana zvinoenderana nechinangwa chakatemerwa kufundwa kwematombo. Kune zvakare mhando ye petrography yekurondedzerwa kwematombo uye iyo petrogenesis yekuziva kwavakabva.
Petrogenesis chinhu chakakosha nekuti ndiko kuumbwa uye mabviro ematombo. Sezvo paine zvakare kumwe kushandiswa petrology iyo inotarisa pane hwehupenyu hwematombo. Inofanirwa kutariswa kuti kunzwisiswa kwakanaka kwezvinhu zvipenyu zvematombo zvinogona kushandiswa munzvimbo zhinji dzakakoshawo, sekuvaka nekubvisa zviwanikwa zvevanhu.
Naizvozvo, iro bazi resainzi rakakosha zvakanyanya kubvira dombo rinoita rutsigiro rwakakosha rwezvivakwa zvevanhu. Izvo zvakakosha kuti uzive chimiro, mabviro uye kuumbwa kwematombo atinoisa uye nekuvakira zvigadzirwa zvedu. Usati waita chero rudzi rwekuvaka kwezvivakwa, zvigadzirwa, nezvimwe. Chidzidzo chekutanga chemhando dzematombo aripo pazasi pekuvaka chinofanira kuitwa kuitira kudzivirira kugona kuderera, mafashama, njodzi, kukoromoka kwepasi, nezvimwe. Matombo zvakare akakosha mbishi zvinhu zvevanhu vazhinji maindasitiri zviitiko.
Kwakatangira petrology uye petrogenesis
Iko kufarira mumatombo kwagara kuripo mumunhu. Icho chinogara chiri chinhu mune yakasikwa nharaunda iyo yakaita kuti tekinoroji ikure kubvira prehistoric nguva. Zvishandiso zvekutanga zvevanhu zvakagadzirwa nematombo uye zvakapa zera rose. Inozivikanwa seDombo Age. Mipiro yekugona kuziva mashandisirwo ematombo anga achinyanya kufambira mberi muChina, Greece uye netsika dzechiArabhu. Nyika yekumadokero inosimbisa zvakanyorwa naAristotle kwavanotaura nezvekubatsira kwavo.
Nekudaro, kunyangwe hazvo vanhu vakamboshanda pamwe nenyika kubvira prehistoric nguva, mabviro epetrology sesainzi akabatana zvakanyanya nekwakabva geology. Geology ndiyo amai sainzi uye yakasimbiswa muzana ramakore gumi nemasere apo nheyo dzayo dzese dzakatanga kusimbiswa. Petrology uye nekukakavadzana kwesainzi kwakavapo pakati pekutanga kwematombo. Nenharo iyi, makambi maviri akabuda anozivikanwa semaNeptunist nemaPlutonist.
Neptunists ndevaya vanopokana kuti matombo anotangira kuburikidza ne sedimentation yenzvimbo uye crystallization yezvicherwa kubva mugungwa rekare rakafukidza nyika yese. Neichi chikonzero, ivo vanozivikanwa nezita revaNeptunist, vachinongedzera kuna Mwari weRoma wegungwa reNeptune. Kune rimwe divi isu tine maPlutonist. Ivo vanofunga kuti mavambo ematombo anotangira kubva kumagima munzvimbo dzakadzika dzepasi redu dzinokonzerwa nekupisa kwakanyanya. Zita revaPlutonist rinobva kuna Mwari weRoma wepasi pePluto.
Ruzivo rwechizvino-zvino nekuvandudzwa kwetekinoroji zvinotibvumira kuti tinzwisise kuti zvese zvinzvimbo zvinogona kuve netsananguro nezvechokwadi Uye ndeyekuti sedimentary matombo anomuka kuburikidza nemaitiro ane chekuita nema intuition aive nemaNeptunist, nepo volcanic, plutonic igneous matombo uye metamorphic matombo ane mavambo avo maitiro anoenderana nharo dzeve plutonists.
Kana tangoziva kuti mabviro uye nzvimbo dzakasiyana dze petrology chii, tichaenda kunoona zvinangwa zvekudzidza. Iyo inovhara kwese kwayakatangira matombo uye zvese zvine chekuita nezvimiro zvavo. Zvinosanganisira mabviro, maitiro anoigadzira, iyo nzvimbo mune lithosphere kwavakaumbwa uye nezera ravo. Izvo zvakare zvine basa rekudzidza izvo zvikamu uye zvepanyama uye zvemakemikari zvivakwa zvematombo. Iyo yekupedzisira isingakoshe nzvimbo yakakosha yekudzidza kugovaniswa uye petrogenesis yematombo muvhu repasi.
Mukati me petrology, iyo petrogenesis yematombo ekunze inodzidziswawo. Iwo ese aya matombo kubva kunze kwekunze. Muchokwadi, matombo anobva kumeteorite uye nemwedzi ari kuongororwa izvozvi.
Mhando dze petrogenis
Sezvatambotaura, pane matavi akati wandei eiyi sainzi uye akaiswa muzvikamu zvitatu zve petrogenesis zvinopa matombo: sedimentary, igneous uye metamorphic matombo. Naizvozvo, zvinoenderana nenzvimbo yekwakatangira mhando dzese dzedombo, pane matavi maviri e petrology:
Zvimwe: ndiye anotungamira kuongorora ese aya matombo anotangira munzvimbo dzakadzika kwazvo dzevhu. Ndokunge, iri basa rekufunda sedimentary matombo. Mhando dzematombo idzi dzinoumbwa kubva mukumanikidzwa kwenzara mushure mekuiswa kwadzo uye kutakurwa nemageological agents semvura nemhepo. Aya madhiri akaiswa pamusoro pemamirioni emakore. Pamusoro pazvose, zvinoitika kumatunhu ekuderera zvakanyanya semakungwa nemakungwa. Uye ndezvekuti iwo akateedzana matete ari kupwanya, kumanikidza iwo madutu kuburikidza nemamirioni emakore.
Endogenous: Ndiyo inobata yekudzidza mhando dzematombo dzinoumbwa munzvimbo dzakadzika kwazvo dzegoko uye jasi repasi. Pano isu tine ese ari maviri volcanic uye plutonic igneous matombo, metamorphic matombo. Kana iri matombo ane igneous, anomuka nekuda kwekumanikidza kwemukati kuburikidza nekutsemuka uye kutonhora, achiumba matombo. Kana vakauya pamusoro pemakomo anoputika iwo matombo anoputika. Kana zvikagadzirwa mukati mematombo eplutonic. Metamorphic matombo anobva kumagneous kana sedimentary matombo akaiswa pasi pesimba guru uye tembiricha. Iwo matombo emhando mbiri ayo akaumbwa pakadzika kwakadzika. Iyi yese mamiriro ezvinhu anounza shanduko mukuumbwa kwayo uye kuumbwa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve petrogenesis nemhando dzayo.
Hausati wava nenzvimbo yemamiriro ekunze?
Kana iwe uchishuva nezvenyika yemeteorology, tora imwe yematanho emamiriro ekunze atinokurudzira uye tora mukana wezvipo zviripo
Zviteshi zvemamiriro ekunze
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Petrogenesis
Solstices uye equinoxes
Gamuchira zvese nhau nezve meteorology mune yako email.